Naing BSell | Item - Ph n tv connector
Ph n tv connector
Huawei G-6 C+G
iPhone5 32GB Black 190,000 Kyats|Like New
iPhone6+ 64GB Gold 540,000 Kyats|Like New
Samsung A5 Vietnam 2Sim အသန့်
#Price - 35000 Kyats
(သင့်​TV မှာ HDMI အ​ပေါက်​ပါရုံဖြင့်​ ဖုန်းဖြင့်​ TV ကြိုးမဲ့
ချိတ်​စက်​စနစ်​ Wifi Display)
(y) Phone (IOS , Android) , PC မှ Screen ကို TV, Projector တွင် Quality ကျဆင်းခြင်းမရှိFull HD တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ
(y) မိမိဖုန်းတွင်ရှိသော Facebook ၊ ဓာတ်ပုံများ ၊ Video များ ကို မိသားစု၊ မိတ်ဆွေ များကိုအတူတကွကြည့်ရှုရန် တီဗီ Screen တွင် ပြသလိုပါသလား ?
(y) ဖုန်းထဲ ရှိဂိမ်းများကို TV Screen ပေါ်တွင် ဆော့ကစားလိုပါသလား ?
(y) ဖုန်းထဲရှိ Presentation များ Project များ၊
Document များကို TV/Projector တွင် Wireless ဖြင့် ပြသလိုပါသလား ?
Mirascreen Wireless Display Adapter လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
(y) မည်သည့် Application မှသွင်းရန်မလို Android Version 4.3 နှင့်အထက် IOS 6.0 အထက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
(y)3In 1 Version ဖြစ်ပြီး Android ဖုန်းများအတွက် Miracast , DLNA . Apple (iPhone,iPad) များအတွက် AirPlay စနစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Airplay , Mircast Mirror Screen စနစ်အသုံးပြုရန် အတွက် တန်ဖိုးမြင့်မားတဲ့ Smart ȚV , Apple TV Box မလိုအပ်တော့ပါ။
(y) မိမိချိတ်ကဆက်လိုသော TV/Projector ရှိ HDMI နှင့် USB တွင် Miracast Device ကို ချိတ်ဆက်ပါ ။
(y) Android ဖုန်း​ Brand ပေါ်မူတည်ပြီး Wifi ဖွင့်​ပြီး Setting က Wifi Display / Screen Mirroring / Smart View / Air Play / Multi Screen Function ကိုရှာပြီး Mirsscreen စက်​နာမည်​​ပေါ်လာရင်​ Connect လုပ်​ရင်​ရပါပြီ။ Wireless Display Setting ရှာမတွေ့ပါက Play Store တွင် Wifi Display Helper ကို ဒေါင်းပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
(y) iPhone / iPad တွင် Wifi On ပြီး Wifi List ထဲတွင် Device ကို ချိတ်ဆက်ပါ။ (Password ကို TV ရှိ Interface တွင်ဖော်ပြထားပါသည်)
(y) Wifi ချိတ်ဆက်ပြီးပါက Safari Browser တွင် 192.168.203.1 သို့ဝင်ရောက်ပါ။
(y) Web Interface တွင် Internet ကိုရွေးချယ်ပြီး တခြားဖုန်း / Router မှ Hotspot ရှိ Wifi ကိုချိတ်ဆက်ပါ။
(y) ချိတ်ဆက်ပြီးပါက Control Center ရှိ Airplay တွင် Adapter ၏ Name ကို ရွေးချယ်လိုက်ပါက Air Play အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
Android တွင် Miracast အသုံးပြု ပုံ
iOS Device များ Airplay အသုံးပြုပုံ
Easycast , Easymirror , Anycast , AnyCast , Anyscreen စသည့် ပုံစံတူ Products များစွာရှိသည့်အနက် Application သွင်းရန်မလိုအပ်ပဲ Error ကင်း အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး Android , IOS အများစုတွင်အဆင်ပြေသော အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။
* Multi-Standard support: Miracast, DLNA, Airplay
* Multi-Platform support: Android 4.2 or above phones/tablet, iphone 6.5s, and so on
* Can directly play local video/music, support mirroring
* Cast Content: Video, photo, game, files
* Extended cable with WiFi dongle to avoid big TV screen blocking wireless signal
* Display Device: HDTV or projector with HDMI port
* Simple installation; Easy handling and configuration - just follow the instructions shown on the start screen on TV
* CPU: AM8285
* DRAM: 128MB
* NAND: 128MB
* WiFi: 802.11n
* Power: DC 5V/1A, through Micro USB port
* Video Out: Up to 1080P HDMI output
* LED: LED indication for power and WiFi status
* 1 x Dongle
* 1 x USB cable with WiFi module
===================================🚌 ဆက်သွယ်မှာယူပါက ရန်ကုန် မြို့တွင်း ကိုdelivery အိမ်အရောက်ပို့စနစ်ဖြင့် ပို့ဆောင်ပေး ပါသည်။
#Mirascreen #Wireless #Display #HDMI #Device